शेखर खरेल निबन्धकार हुन् । यसबाहेक पत्रकारिता, सिनेमा निर्माण र स्तम्भ लेखनमा पनि उनी सक्रिय छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय र संयुक्त अधिराज्यको ग्रीनविच विश्वविद्यालयमा उच्च शिक्षा अध्ययन गरेका खरेल विश्वसाहित्यको पठनमा निकै रुचि राख्छन् ।
साहित्यका मात्र नभएर समाजविज्ञान र दर्शनको अध्ययनमा उनी पोख्त छन् उनी । खरेलको ‘मैले नदेखेका हिप्पी’ निबन्धकृति प्रकाशित छ । शिलापत्रको नियमित स्तम्भ ‘कुरा किताब’मा यसपटक उनै निबन्धकार खरेलका मनप्रिय ३ पुस्तक र कारण प्रस्तुत गरिएको छ ।
१. सिद्धार्थः हर्मन हेस्से
सानो आकारको सुन्दर उपन्यास ‘सिद्धार्थ’ विद्यालय जीवनमै पढेको थिएँ । पछि विश्वविद्यालय पढ्दा पनि पढें । आज फेरि पढेको छु । उमेरको उतारचढावसँगै सिद्धार्थ पढ्दा नयाँनयाँ सोचाइ मनमा आउँछ । किनभने यसमा समेटिएको कथा गहिरो दर्शनको जगमा बुनिएको छ ।
सिद्धार्थको मूल पात्र सिद्धार्थ ज्ञानको खोजीमा तपस्या गर्न घर छाडेर हिँड्छ । उसले भगवान् बुद्धलाई पनि भेट्छ । बुद्धको कुरा पनि उसलाई सम्पूर्णत चित्त बुझ्दैन । पछि सिद्धार्थले विवाह गरेर धनी बन्छ र अन्त्यमा माझी बन्छ ।
माझी बनेर नदी किनारमा बसोबास गर्दा उसले ‘नदीको भाषा सुन्छु’ भनेको छ । अहिले म यो उमेरमा आएर त्यो पात्रको कुरा सुन्दा उपन्यासको घटनासँग आफैंलाई दाँज्न पुग्छु । किनकि उमेर बढ्दै गएपछि छोरा बाबुजस्तो देखिन्छ । यो कुरा सिद्धार्थमा पाइन्छ । किनकि सिद्धार्थले नदीमा आफ्नो प्रतिविम्ब हेर्दा आफ्नो बाबुको अनुहार देखें भनेर भनेको छ ।
१८औं शताब्दीमै लेखिएको सिद्धार्थ निकै चर्चित भयो । यसमा जीवनको यथार्थ र जटिलतालाई बडो मिहीन किसिमले उतारिएको छ । यसमा जीवनलाई अत्यन्त नजिकबाट हेरिएको छ । सबै कथामा यसरी जीवनलाई हेर्न सकिँदैन ।
बुद्धले २५ सय वर्षअघि भनेका कुरा सत्य भएका छन् । बुद्धले भनेकै थिए कि, ‘मेरो कुरा पनि परीक्षण गरेर मात्र स्वीकार गर ।’ सिद्धार्थमा यही बौद्ध दर्शनको जीवन्त छायाँ पाइन्छ र यसले सार्वभौम चेतनाको प्रतिनिधित्व गर्छ ।
२. इफ अन अ विन्टर्स नाइट अ ट्राभर्लर – इतालो चाल्भिनो
इटालियन लेखक इतालो चाल्भिनो २०औं शताब्दीका एक महानतम लेखक हुन् । उनको यो उपन्यासको नाम अलि अप्ठ्यारो नै छ । ‘इफ अन अ विन्टर्स नाइट अ ट्राभर्लर’ किताब मैले सन् १९९९ मा लण्डनस्थित ग्रीनविच युनिभर्सिटीमा पढेको थिएँ । ग्रीनविच विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा नै समावेश गरिएको यो किताब मलाई बडो अद्भूत लाग्यो ।
लेखक चाल्भिनोले यो उपन्यास मौलिक इटालियन भाषामै लेखेका थिए । तर, हामीले अंग्रेजीमा पढ्यौं । यसैले हामीले यसको असली स्वाद पाएनौं कि । तर, किताब पढ््दै जाँदा मैले यसमा उत्तरआधुनिक लेखनको विशिष्ट प्रयोग पाएँ । यसर्थ चाल्भिनोको लेखनलाई प्रयोगशील लेखन भन्न सकिन्छ ।
यसमा केही विशेष अर्थ भेटिँदैन । लेखनको कुनै केन्द्र पनि भेटिँदैन । तर, पढ्दा जुन आनन्द आउँछ, त्यो अभूतपूर्व हुन्छ । यसको पठनले मनमा उमङ्ग दिन्छ । चाल्भिनोको जस्तो लेखनशैली विश्वमा धेरै कम लेखकको आख्यानमा पाइन्छ । यसो त यो उपन्यासमा कुनै भौगोलिक स्थान विशेषको चित्रण छैन । कुनै पात्र जापानका छन् त कुनै यूरोपकै । यसैले यो स्वैरकल्पनामा लेखिएको उपन्यास हो । जसलाई हामी विसङ्गत लेखन भन्न सक्छौं ।
एकपटक लेखक कुमार नगरकोटीलाई भेटेपछि चाल्भिनोबारे कुरा गरें । यसपछि उहाँ पनि ‘इफ अन अ विन्टर्स नाइट अ ट्राभलर’ पढ्न उत्साहित हुनुभयो । मैले नगरकोटीलाई एजुकेसनल बुक हाउसमा चाल्भिनोको अर्को उपन्यास किनेर दिएँ । तर ‘इफ अन अ विन्टर्स नाइट अ ट्राभर्लर’ नै कुमारजीलाई दिने मेरो इच्छा काठमाडौंमा पूरा भएन ।
३. घुम्ने मेचमाथि अन्धो मान्छे – भूपि शेरचन
जीवनमा ‘घुम्ने मेचमाथि अन्धो मान्छे’ कतिपटक पढें भन्ने नै सम्झना छैन । दशौंपल्ट किनें हुँला यो पुस्तक । र पनि कोही न कोही मित्रले लगिहाल्छन् वा हराइहाल्छ ।
भूपिको कविता हामी सबैले पढेका छौं । तर, मलाई के लाग्छ भने भूपिको कविताले दिने भनेको किक नै हो । असाध्यै भित्रसम्म किक दिने । ब्यंग्य र लालित्य दुवै दिने । पछि भूपिका छोरा भूपेश शेरचनसँग मेरो मित्रता भयो । मलाई मात्र होइन, भूपेशलाई पनि बुबाको ‘मैनबत्तीको शिखा’ कविता अत्यन्त मनपर्दो रहेछ । नारी जीवनको आरोह–अवरोहलाई मैनबत्तीको शिखासँग दाँजेर अन्य सुन्दर विम्ब मिसाएर लेखिएको यो कविता अद्भूत छ । मलाई थाहा भएसम्म कालिदासले पनि केही काव्यमा यस्तो प्रयोग गरेका छन् ।
यीबाहेक भूपिका गीतहरू पनि मलाई मन पर्छ । उनका छोटा कविता पनि उत्तिकै सुन्दर छन् । भूपिका कविता पत्रपत्रिकाले सम्पादकीय लेख्दा, राजनीतिक लेख लेख्दा र पुस्तक लेख्दा पनि उद्धृत गर्ने गर्छन् । सबैले आआफ्नो किसिमले भूपिका कविता मन पराएका छन् ।
आमजनजिब्रोमा उखानटुक्का झुण्डिएझैं भूपिका कविता साहित्यकार र आमपाठकको जिब्रोमा झुण्डिएको छ ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, कात्तिक ९, २०७६, ०८:०२:००